IVicarage eNdala-iLizwe eliNtofo-tofo lokuRetreat-Edume ngeBeatrix Potter-Far Sawrey
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLetMe STAY
I-Old Vicarage likhaya elimangalisayo laseLakeland elibekwe kwenye yezona ndawo zintle kwaye zingenakonakala kwiLake District Park. Idume ngoqhagamshelo lwayo kwiBeatrix Potter le ndawo yindawo efanelekileyo yokufumanisa unxweme olusentshona lweLake Windermere. Iindawo ezinqabileyo ezikufutshane neFar Sawrey zithe ngqo emnyango wakho kunye nelali edumileyo yaseHawkshead kwimizuzu embalwa uqhuba. Imisebenzi emininzi inokuqhutywa ngokuthe ngqo kwipropathi kubandakanya ukuhamba okumnandi, iindlela zebhayisekile yeentaba kunye nezinye izinto zangaphandle.
Igumbi lokulala eli-3 elikhulu, ipropathi yokuhlambela emi-3 ethatha wonke umgangatho ophantsi weli khaya likhulu leLakeland. Ijikelezwe ziigadi zabucala kwaye ukonwabela ukuJonga okumangalisayo kweLakeland kwindawo eqengqelekayo enamasimi kunye nemithi ekhokelela iliso kwindawo ephezulu yeentaba zeConiston ngaphaya.
Indawo iye yahlaziywa ngokupheleleyo ngabanini bangoku kwaye yagqitywa ngo-2021.
Ngomnyango wayo wabucala lo mhlaba unoyilo lwangoku olulungele zombini iintsapho kunye namaqela abahlobo. Iholo yokungena ebanzi eneethayile zekwari ezihonjisiweyo ikhokelela kweyona ndawo intle ivulekileyo yokutyela ekhitshini enendawo eziluhlaza, eziluhlaza kunye nezingwevu. Ikhitshi langoku libonisa yonke into yokwenza isidlo sakusasa esilula okanye isidlo se-gourmet nokuba sihlala kwindawo engacwangciswanga yesiqithi okanye itafile ebuyiselweyo. Umgangatho otyebileyo weparquet weHerringbone ubekwe kuzo zonke iindawo ezisezantsi.
Ngaphandle kwendawo yesicwangciso esivulekileyo kukho ipropathi nganye eyilwe kwigumbi lokulala ngalinye eliphefumlelwe yiboutique, iipalethi zemibala etyebileyo ezinokubonakala ngokulula kwikhava elingaphambili le-vogue yokuphila. Onke amagumbi okulala aneen-suite yawo, amabini aneshawari kunye nenkosi enebhafu yobhedu emangalisayo. Igumbi lokulala lesithathu lineholo yalo yabucala ukuze igumbi lokuhlambela lisetyenziswe njengendawo yokuhlambela yosapho kule propati. Amagumbi okulala amabini aneebhedi zobukhulu benkosi kwaye elesithathu lineSuperking enokuba ngamaqela amabini.
Igumbi lokuphumla elihle elinamalaphu atyebileyo eharris tweed, iikhethini eziqinileyo kunye nomlilo opholileyo ovuthayo ukhokelela kwindawo enkulu yabucala elungele ikofu yasekuseni okanye iziselo zokutshona kwelanga ezijonge kumhlaba omhle ojikeleze le propati.
Ifakwe kwi-hamlet yaseFar Sawrey, ukuhamba kunye nokusukela ngaphandle kuninzi ukusuka emnyango. I-cuckoo brow inn ibekwe ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka kwipropathi kwaye inoluhlu olubanzi lwe-cask ales, uluhlu olubanzi lwewayini kunye nokutya okuphekwe ekhaya okusemgangathweni. Ilali yase-Hawkshead kukumgama ongaphantsi kwemizuzu elishumi xa uhamba ngevenkile ekwindawo elula, iibhari, iindawo zokutyela kunye neHawkshead Relish edumileyo yehlabathi. Eli ikwalisango lokungena kwiHlathi laseGrizedale apho kukho imikhondo yebhayisekile yeentaba ezimangalisayo kunye neendlela zehlathi.
I-Hawskhead kunye nommandla ojikelezileyo udume ngokuphefumlelwa nguMbhali uBeatrix Potter, incopho yefama yakhe ikumgama wokuhamba ngokulula kunye neengalo zebhanki yenqaba, umngxuma wokunkcenkceshela owaziwayo wombhali. Ubuninzi bomhlaba ojikeleze iFar Sawrey wathengwa nguBeatrix ukuze akhusele uluntu lwasekuhlaleni lwamafama kunye nendalo ephefumlelweyo yeencwadi zakhe ezininzi. Oku kwanikezelwa kamva kwiTrasti yeSizwe ejongene nomhlaba ngokuwonga yena.
Iidolophu ezingabamelwane ze-AmblesideWindermere zikwakuhambo olufutshane, kwaye zibonelela ngengqokelela enkulu yeeVenkile zeArtisan kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- LetMe STAY
Izimvo eziyi-1 175
Sihlala ngaphandle kwendawo kodwa ziyafumaneka 24/7 ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
ULetMe STAY yi-Superhost